Xildhibaan ka tirsanaa golaha wakiillada Puntland oo caawa shil ku geeryooday – Kalfadhi
Xildhibaan Maxamed Faarax Mire oo ka mid ahaa golaha wakiillada Puntland ayaa caawa ku geeryooday shil gaari oo ka dhacay aaga tuulada Alxamdullilaahi oo ka tirsan degmada Waaciye ee gobolka Karkaar.
Shilkaas waxaa sidoo kale ku geeryooday nin dhalinyaro ah oo ay xildhibaanka ehel ahaayeen isla markaasna baabuurka la socday.
Baabuur booyad ah iyo kan uu saarnaa xildhibaanka ayaa isku dhacay, sida ay noo sheegeen ilo xog ogaal ah oo aan la xiriirnay. Rugta caafimaadka ee degmada ayaa la dhigay maydka laba marxuum.
Marxuum Faarax wuxuu ka mid ahaa xubnaha dhalinyarada ah ee golaha wakillada ku soo biiray sanadkan, wuxuuna ka soo galay gobolka Bari gaar ahaan degmada Boosaso.
Golaha wakiillada Puntland ayaa hadda ku jira fasax kooban oo bil ah, waxayna kalfadhiga dib ugu soo noqon doonaan 20ka maarso markaas oo qorshuhu yahay in ay ka shaqeeyaan miisaaniyadda dowladda ee sanadkan.